त्यस्ता थिए पुष्पलाल, यस्ता छन् केपी ओली « Janata Samachar
त्यस्ता थिए पुष्पलाल, यस्ता छन् केपी ओली
प्रकाशित मिति :5December, 2018 6:06 pm
काठमाडौं । नेपाली टेलिभिजन इतिहासमा ७३ वर्षमा पनि दैनिक कार्यक्रम चलाइरहनु भएका सक्रिय अध्येता, ज्ञाता, विज्ञ, प्राज्ञ गोपीरमण उपाध्याय जनता टेलिभिजनका सञ्चालक सदस्य पनि हुनुहुन्छ । नेकपा एमालेको प्रमुख विभाग मानिने पार्टी स्कुल विभागमा २०५२ देखि लगातार सदस्य रहनु भएका उपाध्यायले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका संस्थापक पुष्पलालसँग केन्द्रीय कार्यालयमा सहायक भएर काम गर्नु भएको हो । उहाँले पुष्पलाल, मनमोहन अधिकारी, मदन भण्डारी, सिपी मैनाली, जीवराज आश्रित, झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल, केपी ओलीसँग काम गर्नु भयो । नेकपाका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी ओलीलेसमेत ‘गोपी गुरू’ भनेर सम्बोधन गर्नु हुने उपाध्यायका सम्झनामा कम्युनिष्ट पार्टीका नेताहरुः
पुष्पलालको त म सहयोगी नै भएर काम गरेँ । उहाँका लागि चिया बोकेँ । खाना पकाएँ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी स्थापनापछि उहाँको कार्यालय सहायक भएर काम गरेँ । मलाई पुष्पलालसँग भेटाइदिनु भएको हो मोदनाथ प्रश्रितले । पहिलोपटक भेट्न आउँदा भेट्न पाइनँ । पछि प्रश्रितज्यूले भेटाइदिनु भएपछि उहाँको अत्यन्त सहयोगी भएँ । उहाँकै कारण २०२८ सालमा उहाँलाई भेटेको हुँ । उहाँलाई भेटेपछि नै मैले महाविद्यालय, युनिभर्सिटीमा पढाउने काम गरेँ । नत्र म पुरोहित भएर कथावाचक भएर बस्थेँ होला । पुष्पलालले संस्कृत पढ्नेलाई संगठित गर भनेर २०२८ मै भन्नु भएको थियो ।
मदन भण्डारीलाई ‘नाइँ’ भन्दिएँ
मोदनाथ प्रश्रित नेपाल प्रगतिशील अध्ययन मण्डल खोलेर राजनीति पढाउन थाल्नु भयो । संस्कृत पढ्न थाल्यौँ । २०३२ मा रुपन्देहीमा शिक्षक थिएँ । २०३३ असार १५ गते पुष्पलालबाट मुक्तिमोर्चा फुट्दा मलाई पनि पुष्पलालबाट अलग हुन अपिल भयो । त्यो पनि मदन भण्डारी, जीवराज आश्रित र मोदनाथ प्रश्रितबाट । सिद्धिनाथ ज्ञवाली, भीमनारायण थारुको पनि यही अपिल थियो । दुई घण्टा कुरा भयो । मैले पुष्पलाललाई छाड्दिनँ भनेर मदन भण्डारीलाई पठाएँ । २०४४ मा फेरि मदनसँग भेट भयो । आदर गर्नु हुन्थ्यो । २०४९ मा ‘हिन्दू धर्मशास्त्रमा मानव उत्पीडनका स्वरुपहरु’ छापियो । मदनलाई पठाएको थिएँ । हात पर्यो कि परेन । लगत्तै २०५० मा उहाँको निधन भयो । मदन सम्झनामा सदा आदरणीय नेता हुन् ।
असाध्यै तार्किक, अध्ययनशील, पढ्न प्रेरित गर्ने नेता हुनुहुन्थ्यो । उहाँको अंग्रेजी असाध्यै राम्रो थियो । भूमिगत जीवनमा पनि सम्पर्कमा थिएँ । रोचक कुरा त के भयो भने, २०३६ मा जनमत संग्रहमा जानु पर्छ भनेर म उभिएँ । पार्टीले बहिस्कार गर्ने कुरा भयो । पछि थाहा भयो, आश्रित पनि जनमत संग्रहमा जानु पर्ने पक्षमा हुनुहुँदो रहेछ । संगठनमा मनोविज्ञान बुझ्ने तीक्ष्ण नेता हुनुहुन्थ्यो जीवराज आश्रित ।
उहाँसँग गाढा सम्पर्क थिएन । पातलो सम्पर्क थियो । सँगै बस्ने अवसर पनि मिलेन । भूमिगत कालमा एकाध भेट भए । उहाँलाई कम्युनिष्ट आन्दोलनको अभिभावकत्व दिनु मदन भण्डारीको बहुत सुझबुझपूर्ण निर्णय थियो । मनमोहन अधिकारीलाई अध्यक्ष नबनाइएको भए कम्युनिष्ट आन्दोलन यहाँसम्म आउँथेन । निजी जीवनसँग परिचित थिइनँ । तर एउटा आदर्श व्यक्ति मान्छु मनमोहन अधिकारीलाई ।
भारत प्रवासमा कतै जाँदा एकपटक बास परेको थियो । पार्टीको नेता भन्ने थाहा थियो । तर उहाँ नै माधवकुमार नेपाल भन्ने थाहा थिएन । बहुदल आएपछि चैँ ठूलो नेता भन्ने लागेको थियो । २०३८ मै मेरै घरमा भेट भएको हो उहाँसँग । दार्शनिक नेता हुन् । अरुजस्तो उहाँसँग निकट त भइएन । सरल र सत्यवादी नेता ठान्छु ।
प्रवासबाट २०४० तिर भैरहवा आउँदा एकजना नेता भेट भयो । क्षयरोग या केको बिरामी भएर राति आउनु भएको थियो । भोलिपल्ट पो थाहा भयो, उहाँ त झलनाथ खनाल हुनुहुँदो रहेछ । व्यक्तिगत लामो सम्बन्ध भएन । अध्ययनशील र राम्रो नेता मान्छु । उहाँका कविता मार्मिक हुन्छन् । मार्क्सवादमा पकड राम्रो छ । उहाँले मेरो पुस्तक प्राकृतिक भौतिकवाद अध्ययन गरेर ‘हजारौँ वर्ष बाँच्ने पुस्तक’को संज्ञा दिनु भयो । मेरो दुई वटा रचनामा उहाँले समीक्षा गर्नु भएको छ । यो मेरा लागि मूल्यवान उपहार हो ।
प्रचण्डसँग अहिलेसम्म गफ हुने गरी भेट भएकै छैन । पोखरा विमानस्थलमा बलराम उपाध्यायको १२ औँ स्मृतिमा भएको कार्यक्रममा जाँदा वामदेव गौतमसँग उहाँसँग पनि विमानस्थलमा भेट भयो । कुराकानी हुन पाएको छैन । भेट्दा हात चैँ मिलाइएको छ ।
वामदेव गौतम अत्यन्त हकी र दृढनिश्चय भएका व्यक्ति हुन् । उहाँमा कुनै नराम्रो दुर्भावना देख्दिनँ । उहाँका समकालीन नेतामा उहाँजति अरु नेतामा अध्ययनशीलता अभाव देख्छु । उहाँको पुस्तक नै वामदेव गौतमको ऐना हो । त्यो हैसियतमा सोच्ने अरु नेता छैनन् कि ? सबै योजना उहाँको अशल लाग्छ ।
असाध्यै बुद्धिमान लाग्छ । साहसी, चलाख पनि देख्छु । २०४४ मै जेलमा बनारसमै भेटेको थिएँ । मदन भण्डारीसँगै भेट भएको हो । अखिल भारतीय प्रवासी नेपाली संघको कार्यक्रममा भेट भएको हो । त्यहाँ मदन, सीपी मैनाली र केपी आउनु भएको थियो । त्यतिखेर मदनले प्रशंसा गर्नु भएको थियो, राम्रो लेख्नुहोस् है ! त्यतिखेर केपी ओली एकदम पातलो हुनुहुन्थ्यो । दोस्रोपटक केपी ओलीलाई रुपन्देहीको मणिग्राममा भेटेको हुँ । घनश्याम भुषालको विवाहमा भेटेको हुँ । दूरदृष्टि राख्ने क्षमताको नेता हो । २०४८ पछि निरन्तर उहाँसँग सम्पर्क छ । भेट्दा मलाइ ‘गोपी गुरु’ भन्नुहुन्छ । यो पनि पढ्नुहोस्ः
१ रुपैयाँ आइसी तिरेर ‘बाकसमा मान्छे नाचेको’ हेरियो